» विश्ववासीका लागि एउटा अनिश्चित प्रश्न: सामाजिक दूरीको मर्यादा कहिलेसम्म ?
विश्ववासीका लागि एउटा अनिश्चित प्रश्न: सामाजिक दूरीको मर्यादा कहिलेसम्म ?
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २३:४२
कोरोना भाइरस विश्वका लागि एकदमै नयाँ भाइरस हो । यो भाइरसको उत्पति कसरी भयो रु, यसको उपचार के होरु र, यो भाइरसको महामारी कहिले रोकिएला रु यो बारेमा अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर एउटा कुरा सय प्रतिशतले प्रमाणित भएको छ कि यसलाई सामाजिक दूरीले मात्र रोक्न सम्भव छ ।
जुन देशले सामाजिक दूरीलाई अपनायो ति देशले संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् । जसकारण सबै देशहरुले सामाजिक दूरी अपनाइरहेको छन् । सामाजिक दूरी बनाउनका लागि नै विश्वमा लकडाउनको सुत्र प्रयोग भइरहेको छ । तर यो लकडाउन कहिलेसम्म लगाउने भन्ने चिन्ता भने सबै दशलाई छ ।
त्यो स्पेनिश फ्लू, जस्ले विश्वका करोडौंको ज्यान लियो
पहिलो विश्व युद्ध सकिन लाग्न लाग्दा एक भाइरसले विश्वलाई नै हमला गरेको थियो । त्यो भाइरसले विश्वका एक चौथाई मानिसहरु प्रभावित भए । उक्त महामारी ल्याउने भाइरसलाई आज विश्वसले स्पेनिश फ्लू नामबाट चिन्छ । पूरै विश्वमा उक्त महामारीबाट पाँचबाट दश करोड मानिसहरुका ज्यान गएको थियो ।
सन १९१८ मा भाइरसको महामारीको समयमा अमरिकाका कयौं शहर लिर्वटी बान्ड परेडको तयार गरिरहेको थियो । त्यो परेडले मार्फत यूरोपेली देशहरुसंगको युद्धमा मदत गर्नका लागि रकम जुटाइरहेको थियो । फिन्डेल्फिया र पेन्सिल्वेनिया शहरका प्रमुखले महामारीको बाबजुद परेड गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त समय शहरका ६ सय सैनिक पहिलाबाट नै स्पेनिश फ्लूको भाइरसबाट पीडित थिए ।
फेरि पनि परेड निकाल्ने फैसला लिइएको थियो । त्यो समय लुई र मिसौरी राज्यले आफ्नो हुने वाला परेड रद्ध गरेको थियो । र, मानिसहरुलाई एक ठाउँमा जम्मा हुनेबाट रोक्नका लागि अन्य कदम पनि उठाएको थियो । फलस्वरुप, फिलाडेल्फियामा एक महिनामा स्पेनिश फ्लूको कारण हजार भन्दा बढि मानिसहरु मरेका थिए । जबकी सेट लुईसमा मानिसहरु सामाजिक दूरीको कारण बचेका थिए । इतिहासमा यसको धेरै उदाहरणहरु मिलेको छ ।
इतिहासमा कोरिएका यी उदाहरणहरू
इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । सन १९१८ मा अमेरिकाले पनि धेरै शहरमा सार्वजनिक समोरोहमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । स्कूल, थिएटर, चर्च सबै बन्द गरिदिएको थियो । पूरै एक शताब्दीपछि विश्व फेरि उक्त महामारीमा गुज्रिरहेको छ । तर यस शताब्दीमा विश्वका त्यो समयको जनसंख्याको तुलनामा अहिले ६ अरब बढी वृद्धि भएको छ ।
कोरोना भाइरस स्पेनिश फ्लू भाइरस जस्तो होइन । वैज्ञानिकका लागि पनि यो भाइरसबारे अनुसन्धान गर्ने विषय नै बनेको छ । अहिले यो भाइरसलाई रोक्नका लागि एक मात्र उपाय रहेको छ त्यो हो । सामाजिक दूरी । यसबाट कोरोनाको भाइरसको चेन तोड्न सकिन्छ ।
लगभग सबै देशहरूले घरहरूमा बस्न, लकडाउन र सामाजिक दूरी अनुशरण गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्। यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको मानिसहरूलाई संक्रमित मानिससँगको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु हो। सामाजिक दूरीको यो चरण अलि लामो समय सम्म चलिरहेको छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको एक रिपोर्टका अनुसार अमेरिकामा सामाजिक दूरीको यो चलन २०२२ सम्म जारी रहन सक्छ । यो आशा गरिएको छ कि २०२२ भित्र कोरोनाको भ्याक्सिन र औषधि पत्ता लगाइनेछ । तर त्यसबेला सम्म सामाजिक दूरी र क्वारेन्टाइनलाई पछ्याउनु नै बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।
यदि मौसमको चक्रले यस भाइरसमा केही प्रभाव पार्दछ भने, यो सम्भव छ कि भाइरस वर्षको अन्त्यमा फेरि सक्रिय हुनेछ।
कोरोनाबाट संक्रमित एक व्यक्तिले औसत २ देखि ३ व्यक्तिमा संक्रमण सार्ने गरेको पाइएको छ ।
एउटा अध्ययनका अनुसार स्पेनिश फ्लु भाइरसको प्रजनन क्षमता १।८ रहेको छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरसको क्षमता १।०६ बाट देखि ३।४ छ । जबकि नजिकको रिनोवा वायरसमा प्रजनन क्षमता १।२–१।८३ छ । उही समयमा, कोरोनामा प्रजनन क्षमता १।४ देखि ३।९ छ, जुन सबै प्रकारका भाइरसको तुलनामा उच्च हो।
कोरोनामा चीनमा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार यस भाइरसका लक्षणहरू ५ दिनमा शरीरमा फैलिन्छन् । र १४ दिनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस बीचमा, यदि कोरोनाले सामान्य व्यक्तिलाई संक्रमित गर्छ भने, यसले २ देखि ३ मानिसहरूलाई संक्रमित गर्दछ । र त्यसपछि उही २ देखि ३ व्यक्तिले उही संख्यामा संक्रमित गर्दछ र कोरोना प्रकोपको दायरा बढ्छ।
यस तरिकाले एक कोरोना संक्रमित एक महिना मा लगभग २ सय ४४ व्यक्ति संक्रमित गर्दछ । यदि रोक्दैन भने, उही संख्या अर्को दुई महिनामा ५९ हजार ६०४ सम्म पुग्न सक्छ ।
यो भाइरस त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पनि फैलिएको छ, जोसंग भाइरस संक्रमित बनिसकेका छन् । तर कुनै लक्षणहरू देख्दैनन्। यसलाई साइलेन्ट ट्रान्समिशन भनिन्छ। यस्तो मौन प्रसारण केसको १० प्रतिशतमा देखा पर्दछ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूलाई मानिसहरूबाट हटाए भने, त्यसो भए कोरोनालाई धेरै हदसम्म प्रसार गर्नबाट रोक्न सकिन्छ।
चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको बारेमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार भाइरसको शक्ति सामाजिक दूरीबाट कम गर्न सकिन्छ । यो प्रभाव वुहानमा लकडाउनको क्रममा पनि देखियो। सामाजिक दूरीको कारण, यस भाइरसको प्रजनन क्षमता २।३५ बाट झन्डै १ मा झरेको थियो।
यसको मतलब लकडाउन र सामाजिक दूरीको नियमबाट मात्र कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति मात्र संक्रमित हुन सक्छ। सामाजिक दूरीको अर्को लक्ष्य यसको वेग कम गर्नु हो। त्यो हो, यदि यो व्यक्तिमा पुग्न बढी समय लिन्छ भने, त्यसपछि यसको शक्ति कम हुनेछ। यसले कम्तिमा मानिसहरूलाई हानी गर्दछ।
अन्य मानिसहरुबाट अलग रहनुहोस्
यदि व्यक्तिहरू एक अर्काको नजिक आउँदछन, तब भाइरसको प्रकोप फैलिनेछ। कोरोनाको संक्रमण रोक्न बिभिन्न देशहरूले बिभिन्न तरिका अपनाएका छन। बेलायतले यसको लागि कम्प्युटर मोडेल अपनाएको छ, जसले संक्रमण कसरी फैलिन्छ भनेर देखाउँदछ ।
बेलायतका लागि मोडेल इम्पेरियल कलेज लन्डनले तयार गरेको हो र यसको प्रतिवेदन १ ६ मार्चमा प्रकाशित भएको थियो। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतको जनसंख्यालाई हेर्दा दुई प्रकारका मोडेलहरू अनुसन्धान गरियो । एउटा मोडेल अन्तर्गत यो जोड दिइयो कि संक्रमण वा लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई बाँकीबाट अलग राख्नु पर्छ।
दोस्रो मोडेल अन्तर्गत, संक्रमित व्यक्ति र उनीहरूको परिवारलाई घरमा राख्नु पर्छ। र बाँकी मानिसहरूलाई सामाजिक दूरी प्रदान गरिनु पर्दछ। यस अनुसन्धानमा एउटा डरलाग्दो तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ यदि बेलायतमा रोकथामको कुनै कदम चालेन भने त्यहाँ ५ लाख र १० हजार मानिस मर्नेछन्।
भाइरसलाई कमजोर पार्न लामो समयसम्म सामाजिक दूरी पछ्याउनु महत्त्वपूर्ण छ। स्पष्टतया, सामाजिक दूरीमा कडाईका साथ पालना गर्नु त्यति सजिलो छैन। त्यहाँ सबैको जीवनमा अवसरहरू हुन्छन् जब मानिसहरू भेला हुन्छन्।
खैर, विशेषज्ञहरु आफैंले पनि विश्वास गर्छन् कि लामो समय सम्म एक अर्काबाट टाढा रहनु हृदय रोग, तनाव र पागलपनको शिकार हुने सम्भावना बढाउँदछ। आज हामी सन १९१८ को युगमा छैनौं जहाँ सामाजिक दूरी पछ्याउन गाह्रो छ।
आज हामी टेक्नोलोजीको सुनौलो चरणमा छौं, जहाँ टेक्नोलोजी मार्फत हामी एकै समयमा सम्पूर्ण विश्वसँग सम्पर्क गर्न सक्दछौं। कोरोनालाई हटाउन र स्वस्थ रहनका लागि लामो समयको सामाजिक दूरी बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ ।